Global Voices teny Malagasy » Tombouctou : “Ny Tsangambato No Omena Rariny, Fa Tsy Ny Vehivavy Voaolana” · Global Voices teny Malagasy » Print
Tombouctou : “Ny Tsangambato No Omena Rariny, Fa Tsy Ny Vehivavy Voaolana”
Voadika ny 19 Oktobra 2016 15:01 GMT 1	 · Mpanoratra Abdoulaye Bah Nandika Candy
Sokajy: Mali, Ady & Fifandirana, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Nandefa antson'ny fo i Georges, maliana mpanao gazety sady bilaogera, mba hiampangàna ny zavamisy hoe nasiam-panamboarana ireo tsangambato, saingy hita ny tsy fisian'ny fitsaràna na kely aza atao amin'ireo raharaha herisetra ara-nofo tahàka ny tian'ireo sampan-draharaha ara-pitsarana maliana sy iraisampirenena hohadinoina.
Tao amin'ny bilaoginy nampitondrainy anarana iray tena lavabe, “AO AMIN'NY GRIN  be ny zavatra ifampiresahana eo ampisotroana dite iray vera“, nanoratra lahatsoratra iray izy nomeny lohateny hoe Tombouctou : Tsy manantsiny manoatra noho ireo fasan'ny maherifo ry zareo vehivavy ireo» !  :
Raha nanaraka ny vaovao iraisampirenena ianareo dia tsy maintsy nandre ny fanamelohana an'i Ahmed Al Faqi Al Mahdi hifonja sivy taona an-tranomaizina. Ny Fitsaràna Iraisampirenena misahana ny Heloka Bevava (CPI) dia nanameloka io maliana jihadista io ho tomponantoka tamin'ny fandravana ny maoske Sidi Yahia tao Tambouctou tamin'ny 2012, niaraka taminà mozole 9 (fasan'ny maherifo). Ahmed Al Faqi no voalohany nentina notsaraina noho ny heloka vita tao anatin'ny tena nampahamay ny krizy maliana, fony teo ambany fibodoana ireo faritra avaratry ny firenena.
Saingy tsy nijanona fotsiny tamin'ny resaka fandravana fanànana ara-kolontsaina ireo heloka natao. Nanao fanolànana sy endrika herisetra ara-nofo hafa ihany koa tamin'ireo vehivavy sy ankizivavy ireo vondrona mitam-piadiana nibodo ny toerana. Na teo aza ny fisian'ireo 171 niharan'izany sy ny fitarainana miisa 113 napetrak'ireo niharan'ny fanolanana sy herisetra ara-nofo, tsy mbola misy olona voahelingelina momba io resaka io mihitsy. Tsy manantsiny mihoatra noho ireo mozole ireny niharam-doza ireny, toy ny varavaran'ny maoske Sidi Yahia. Fa lasa aiza ny tena zavatra manandanja e ?…
Saingy efa nasiam-panamboarana sy navaozina ireny mozole ireny, niaraka tamin'ny fanampian'ny UNESCO. Tsy misy afa-tsy ny varavaran'ny maoske Sidi Yahia sisa no tavela, izay nasiam-panamboarana ihany koa tamin'ny septambra 2016 teo, natrehan'ireo olobe, ireo mponina ao Tombouctou, ny solontenan'ny UNESCO sy ny MINUSMA …Tsy milaza aho akory hoe tsy misy lanjany ny fanarenana ireny fanànana ara-kolontsaina ireny, izay napetraka ho lovan'ny kolontsain'ny zanak'olombelona. Faly aza aho tamin'ny rariny nomena an'ireo zavatra mijoro eto Tombouctou. Saingy tsy tokony ho noferana ho amin'izany sy hijanona eo….
Taorian'ny nampahatsiahivany hoe fony mbola voabodo ny faritra avaratr'i Mali, nanao herisetra ara-nofo tamin'ny endriny maro samihafa ireo jihadista sy vondrona hafa mitam-piadiana, indrindra fa ny fanolàna, dia ampian'i Georges bilaogera hoe :
Araka ny lazain'ny tatitra  tamin'ny 2012 nataon'ny Kaomisera Ambony Ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny resaka Zon'Olombelona, momba ny toedraharaha misy ny zon'olomelona ao Mali. Ny ONG Wildaf-Mali (Vehivavy eo amin'ny sehatry ny Lalàna sy Fampandrosoana ao Afrika) dia nahangona vehivavy 171 niharam-pahavoazana taminà herisetra ara-nofo avy any amin'ny faritra avaratr'i Mali. Araka ny voalazan'i Bintou Bouaré, filohan'ny Wildaf-Mali « amin'ireo vehivavy 171 , nanaiky hametraka fitoriana ny 113. Tao anatin'ny taona telo, vehivavy 30 monja no nohenoin'ny mpampanoa lalàna tao amin'ny kaominina faha3 ao Bamako ».
Mba hahatakarana ireo olana atrehan'ireo vehivavy voaolana any anatin'ny fiarahamonina misy azy ireo any avaratr'i Mali, manampy izy hoe :
Zavapady ao Mali ny resaka fanolanana. Zairin'ny mason'ny fiarahamonina ny molotr'ireo izay niharan'izany. Amin'ireo vehivavy sy ankizivavy 171 voaisa ho niharan'ny herisetra ara-nofo, 58 no tsy nety hametraka fitoriana. “Ny sasany mihevitra ny tenany ho tompon'antoka tamin'izay nanjo azy. Raha ny hafa indray matahotra ny hijoro ho vavolombelona noho izy ireo miaina ao anaty vondrom-piarahamonina iray miaraka amin'ireo nanolana an-dry zareo, izay miriaria toy ny tsy nisy na inona na inona eny rehetra eny” hoy i Bintou Bouaré, filohan'ny l’ONG Wildaf-Mali tamiko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/19/90420/
 AO AMIN'NY GRIN: http://attino.mondoblog.org/
 Tombouctou : Tsy manantsiny manoatra noho ireo fasan'ny maherifo ry zareo vehivavy ireo» !: http://attino.mondoblog.org/2016/09/30/tombouctou-femmes-innocentes-mausolees/